မကြာသေးခင်ကမှထွက်ရှိလာတဲ့ iOS 11.2.6 update! – AsiaApps
မကြာသေးခင်ကမှထွက်ရှိလာတဲ့ iOS 11.2.6 update!
February 20, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on မကြာသေးခင်ကမှထွက်ရှိလာတဲ့ iOS 11.2.6 update!
မကြာသေးခင်ကမှထွက်ရှိလာတဲ့ iOS 11.2.6 update မှာတော့ iOS 11.2.5 update မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းထားပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယလူသုံးများစကားလုံး “Telugu” ကိုတခြား iPhone ကိုပို့လိုက်ရင် အပို့ခံလိုက်ရတဲ့ iPhone မှာ Messaging app တွေအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ ပြဿနာပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ Third-party apps တွေရဲ့ external accessories တွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါ အဆင်မပြေတဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
iOS 11.2.6 update file ကတော့ 40MB ကျော်လောက်သာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဖုန်းလေးက iOS 11.01 သာရှိသေးတာကြောင့် File size က 600MB ကျော်နေတာပါ။ iOS 11.2.6 update မှာမထင်မှတ်ပဲဖြစ်ပေါ်လာမယ့် Bug ကိုစောင့်ကြည့်ချင်သူ (သံသယများတဲ့လူ) တွေက လွဲလို့ကျန်တဲ့ Update အသစ်ကိုခုံမင်တဲ့ User တွေအနေနဲ့ကတော့ “Download and install” ကိုနှိပ်ပြီး မိမိရဲ့ဖုန်းကို version မြှင့်တင်နိုင်ပါပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ iOS 11.3 ရောက်မှပဲ အတိုးရော၊ အရင်းရော ပေါင်းပြီး update လုပ်တော့မှာပါ။
အိန္ဒိယစကားလုံးပြဿနာကိုမြင်သာအောင် အောက်ကဘဲလေးရဲ့ Twitter post ကိုရှိုးပါလေ။ ?
သင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာဖုန်းအသုံးပြုတဲ့ အချိန်ကို ဖော်ပြပေးမယ့် Moment – Screen Time Tracker